มุมมอง 608 849
97%5955 133
နို့ဘီလူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အစအဆုံးကို
(27.11.2020) ရက်နေ့တွင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ App လေးကို
နို႔ဘီလူး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး အပိုင္း (၃) - လူမင္း ေဇရဲထက္ ေ႐ႊမႈံရတီ - Myanmar Movies Drama Action
Mahar is the distributor of DVD, online & offline channel, authorized IP agent of Movie production, Mahar TV Channel for TV audiences, Mahar App for mobile audiences, Mahar THvid online Media for online audiences and Mahar & Mahar mobile Facebook Social Media for social network.
ABC Content Solutions သည်ဒီဗီဒီ၊ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းချန်နယ်၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၏တရားဝင်အိုင်ဒီကိုယ်စားလှယ်၊ တီဗီပရိသတ်များအတွက် Mahar TV Channel၊ မိုဘိုင်းပရိသတ်များအတွက် Mahar အက်ပလီကေးရှင်း၊ အွန်လိုင်းပရိသတ်များအတွက် Mahar THvid Online Media နှင့် Mahar & Mahar မိုဘိုင်း Facebook လူမှုမီဒီယာ လူမှုကွန်ယက်။
ABC Content Solutions သည္ဒီဗီဒီ၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ေအာ့ဖ္လိုင္းခ်န္နယ္၊ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး၏တရားဝင္အိုင္ဒီကိုယ္စားလွယ္၊ တီဗီပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar TV Channel၊ မိုဘိုင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar အက္ပလီေကးရွင္း၊ အြန္လိုင္းပရိသတ္မ်ားအတြက္ Mahar THvid Online Media ႏွင့္ Mahar & Mahar မိုဘိုင္း Facebook လူမႈမီဒီယာ လူမႈကြန္ယက္။
We investedalot in movie contents and launched biggest movie library is available only in Mahar. Mahar targets to diverse user groups. From our experience on THvid channel, Myanmar hasahuge movie fan locally. Mahar had previous launched an App in Play Store for over4years. And launchedanew version recently for Myanmar market. We expected to maintain 5,000 over movie library for our users.
Myanmar Video - Noh Be Luu - Lu Min , Zay Ye Htet , Shwe Hmone Yati - Drama - Action - Love
LIN NAING TUN 12 วันที่ผ่านมา
အပိုင္​း ၄ မရိွဘူးလားဗ်ာ
မဟာ 12 วันที่ผ่านมา
မဟာချစ်ပရိတ်သတ်လေးတို့အဆင်ပြေအောင် convid ကာလမှာ ညီမတို့မဟာမှ promo code လေးတွေလဲ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပေးပါတယ်ရှင့်။ပြီးတော့ fb pg တို့, youtube တို့ကနေလဲ ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို အပိုင်းလေးတွေ ခွဲပြီးကြည့်ရူလို့ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ ဒီလလေးမှာတော့ မဟာချစ်ပရိတ်သတ်တို့အနေနဲ့ ဇာတ်ကားအစအဆုံးလေးကို Mahar Application ထဲမှာ ဝင်ရောက်အားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေနော်... နို့ဘီလူး ဇာတ်ကားလေးကို မဟာအပလီကေးရှင်းထဲမှာ တင်ပေးထားတာမို့ ဇာတ်ကားကြည့်ရန်လင့် 👉 mahar.digital/BLuu အမြဲတမ်းအားပေးတဲ့အတွက် လဲ မဟာမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်......
မြန်မာ အိုးအလန်းလေးများ หลายเดือนก่อน
J Mind หลายเดือนก่อน
Ko Aung หลายเดือนก่อน
အားပေးမှုအတွက် မဟာတီဗီ(မဟာရုပ်သံလိုင်း)မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်😍😍နောက်ထပ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဇာတ်ကားရှိရင်လည်းပြောပေးသွားနော် မင်မင်က တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်😍😍 Mahar Entertainment မှာလည်း ဟာသဇာတ်ကားလေးတွေ တင်ဆက်ပေးထားလို့အားပေးပါဦးနော်😍😍
Hsu Myat wai หลายเดือนก่อน
Zin Myo หลายเดือนก่อน
Zawe Yathu.hsenwi หลายเดือนก่อน
​ဖြတ်ပြီးတင်တာ ကျော်ခွကျော်ခွနဲ့ ဖြစ်သလိုတင်
Tin Zar หลายเดือนก่อน
Khon Khet Htan หลายเดือนก่อน
mahar yayaya kyay zuu tin tae ထာဝရအမေatar lae tin pay ong :*
mom HD TV หลายเดือนก่อน
Soe Lwin หลายเดือนก่อน
P.T.L II หลายเดือนก่อน
အဖွား သရုပ်ဆောင် ကောင်းချက်
Ky Uv หลายเดือนก่อน
Myint zu Myint zu หลายเดือนก่อน
Hjh Fg หลายเดือนก่อน
🎬 ႏို႔ဘီးလူ အပိုင္း ( ၃ )
THEL LAY หลายเดือนก่อน
War War หลายเดือนก่อน
Myo Thant หลายเดือนก่อน
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဒါမ်ိဳးကသမီးရှိ့သူေတြ ျကည့္သင့္တယ္ ျကည့္ရဒါအျကဳိးရှိတယ္ဗဟုတုတ
ၾကည့္ရတာ leeလိုပဲ အစအဆံုးမတင္ေပးဘူး
dar dar หลายเดือนก่อน
Shwe Tharlay หลายเดือนก่อน
ေဆာင္း ႏွင္းေဝ หลายเดือนก่อน
အစ အဆံုး တင္ေပးပါလား 😢
fjgig ovkv หลายเดือนก่อน
Lay Lay หลายเดือนก่อน
Naing Love หลายเดือนก่อน
Chaw Lay หลายเดือนก่อน
Htet Lin หลายเดือนก่อน
Oo Lay Gyi หลายเดือนก่อน
arkar myo หลายเดือนก่อน
တစ်နေ့တစ်ပိုင်းတင်ပေးတာတောင်ကျေးဇူးတင်ရမှာ အစတုန်းကရုံတင်ကားတွေကြည့်ချင်ရင် Mahar Channel နဲ့ Mahar Appမှာပဲတင်ပေးတာ အခုက facebook ရော THvid ရောတင်ပေးတယ် ကျေးဇူးမတင်ပဲစောက်ပြစ်လိုက်ပြောနေကြသေးတယ်လူတွေ
Naing Lin หลายเดือนก่อน
A.Y.B MZt ́ ́ หลายเดือนก่อน
တ​စ္​​ေန႔ တစ္​ပုိင္​း ပုံမွန္​တင္​​ေပးသြားမွာမုိ႔ အား​ေပးၾကပါအုံးလုိ႔စ္​ okok😊 Like and share လုပ္​​ေပးၾကပါခင္​ဗ်ာ Video အသစ္​​ေတြတင္​တာသိရ​ေအာင္​ ​ေဘးက Bell ​ေလးကုိလဲႏွိပ္​​ေပးသြားအုံး​ေလ , တစ္​​ေယာက္​ခ်င္​းစီကုိ ​ေက်းဇူးပါ​ေနာ္​,
Nyint Win หลายเดือนก่อน
Vigen Vigen หลายเดือนก่อน
Kam Suu หลายเดือนก่อน
ပီးရင် မုန်းလို့ရရင်မုန်းချင်တယ် ဇာက်ကား တင်ပေးပါခင်မျ
May That Htar หลายเดือนก่อน
အစ အဆုံး တငင္ေပးပါ
Nay lin Oo หลายเดือนก่อน
Shwe myanmar channel မွာhd full movie တင္ထားတယ္🤣
pink omg pink หลายเดือนก่อน
Ni Ni Lwin หลายเดือนก่อน
Thank you so much bar mahar .So nice movie
Htun Hlaing Win หลายเดือนก่อน
အပိုင်း ၄၅၆၇ ပြန်တင်ပေးပါဦးဗျ
Vi Vo หลายเดือนก่อน
mandalay bhone myat หลายเดือนก่อน
လမင္းေလ Htet หลายเดือนก่อน
Win Naing หลายเดือนก่อน
Mahar be more successful
Nang Nang หลายเดือนก่อน
Aye Moe หลายเดือนก่อน
Lone Aung หลายเดือนก่อน
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မဟာ ရေ.. ချည် ဇာတ်ကားလေးတင်ပေးပါအုံး
music komchanal หลายเดือนก่อน
Myatkay Khine หลายเดือนก่อน
Kyaw Zin หลายเดือนก่อน
စနေ့နေ့ ည ၇ နာရီ မှာ mahar ရုပ်မြင်သံကြားကနေ အစအဆုံး လွတ်မှာ အဲ့ကျမှ ကြည့်တော့မယ်
May Soe หลายเดือนก่อน
Ye Kyaw หลายเดือนก่อน
ျမန္မာကားေတြထဲမွာ ဒီကား အႀကိဳက္ဆံုး
Kyaw Kyaw หลายเดือนก่อน
ဒီကားပြီးရင် ဖေ့စ်ဘုတ်ဘုရင်မကား တင်ပေးပါ🙏
Kalayar Mon หลายเดือนก่อน
Hala Ukino หลายเดือนก่อน
Lami Samui หลายเดือนก่อน
Sawku Sawku หลายเดือนก่อน
may shin thant หลายเดือนก่อน
Ni Aung หลายเดือนก่อน
အမယ်လေး ကြည့်ရတာ ဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့
Ko ko Htay หลายเดือนก่อน
အယ္​.ၾကည္​့ရတာ ဓာတ္​ပ်တ္တာ အပိုင္​းပိုင္​းနဲ႔..အစအဆုံး​ေလး တင္​​ေပးပါလား.မဟာရယ္​
Mjoe Joe หลายเดือนก่อน
GREEN APPLE หลายเดือนก่อน
Wai Yan M หลายเดือนก่อน
Aow Ko Ko หลายเดือนก่อน
Aye Aye หลายเดือนก่อน
အပိုင်း ၁ ပြန်တင်ပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Aung Myo หลายเดือนก่อน
Ever Smile หลายเดือนก่อน
Mma6327 Mma หลายเดือนก่อน
Ttt Joa หลายเดือนก่อน
Jora Stremidlo หลายเดือนก่อน
ေၾကာ္ျငာ ေတြကလည္းမ်ားလိုက္တာ ႐ုပ္ရွင္ကားေကာင္ပါတယ္ဆိုမွ
Na Na หลายเดือนก่อน
yehtet Cvhh หลายเดือนก่อน
Khaing Soe Tun หลายเดือนก่อน
Evely Chin หลายเดือนก่อน
true move หลายเดือนก่อน
Aung Thu หลายเดือนก่อน
Tha Mine Channel หลายเดือนก่อน
ကောင်းတယ်ရှင့် ကွျန်မchannelလည်းအားပေးပါအုန်းရှင့် မြန်မာ့သမိုင်းအ​ကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်နေတဲ့channelလေးပါရှင့်❤😘❤😘❤
@Win Htet Aung ကျေးဇူးပါ
Win Htet Aung หลายเดือนก่อน
@Tha Mine Channel အားပေးတယ်လေ ကျွန်တော်လည်း ကျေးဇူးတင်တယ် လုပ်ပါဦး
@Kyaw zall ကျေးဇူးပါ❤
@ÔG BOPAING ဟုတ်တယ် အားပေးတဲ့လူမရှိလို့ပါ😁😁😁
ÔG BOPAING หลายเดือนก่อน
Nay Htoo หลายเดือนก่อน
ကောင်းတယ်ရှင့် ကွျန်မchannelလည်းအားပေးပါအုန်းရှင့် မြန်မာ့သမိုင်းအ​ကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်နေတဲ့channelလေးပါရှင့်❤😘❤😘
Than Naing lin หลายเดือนก่อน
နို့ဘီလူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အပိုင်း (၁) - လူမင်း ဇေရဲထက် ရွှေမှုံရတီ - Myanmar Movies Drama Action
နို့ဘီလူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အပိုင်း (၅) - လူမင်း ဇေရဲထက် ရွှေမှုံရတီ - Myanmar Movies Drama Action
มุมมอง2336 714
มุมมอง 1 006 512
Myanmar Trainer Arrafat
มุมมอง 874 000
နို့ဘီလူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အပိုင်း (၂) - လူမင်း ဇေရဲထက် ရွှေမှုံရတီ - Myanmar Movies Drama Action
စရိုက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အပိုင်း(၄) - လူမင်း ကျော်ထက်အောင် ခိုင်သင်းကြည် ထွန်းအိနြ္ဒာဗို Drama
ထော့ကျိုးငမိုး (ပထမပိုင်း) #နေထူးနိုင် #မြသင်းခြယ်
День солнца.4серия
ဂန္ထဝင်မေမေ / ဂႏၴဝင္ေမေမ
Talking Thailand ประจำวันที่ 17 มกราคม 2564
มุมมอง 215 870
มุมมอง 712 624
ซิกงิก - ลำไย ไหทองคำ【Cover MV】โปรแกรมแอนเดอะแก๊ง
มุมมอง 166 690
มุมมอง 419 723
มุมมอง 623 449
มุมมอง 231 916
มุมมอง 492 019
มุมมอง 124 403
มุมมอง2504 322
มุมมอง 96 923